China Barbed Fantsika orinasa sy ny mpanamboatra |Shengsong
Ny spikes amin'ny rindrina antsoina koa hoe spikes hareza dia mitovy amin'ny cactus izay manana tsipìka maranitra ny vatany.Ny spikes amin'ny rindrina dia vita amin'ny plastika, tariby vy tsy misy pentina, tariby aluminium ary vy galvanized.Izy io dia mahatohitra ny andro ary tena mateza.
Ireo rafitra spike ireo dia vahaolana tsotra sy mahomby manatsara ny fiarovana ny rindrina misy na fefy fiarovana, na ho an'ny tatatra.Ao anatin'izy ireo, ny spikes amin'ny rindrina tsy mitongilana sy galvanized dia natao hiasa ho an'ny fefy fiarovana, ny spikes amin'ny trano mimanda no matanjaka indrindra amin'ny tsena ary koa ny spikes antsantsa.Ny spikes amin'ny rindrina dia mora apetraka ary tonga amin'ny karazana coatings na vita.
1) Fitaovana: Hot-atsoboka galvanized mangatsiaka nanakodia taratasy, Stainless vy taratasy.
2) Hatevina: 0.8mm-2mm
3) Halavany: 0.5m, 1m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 2m, sns.
4) Barb halavany: 64mm-100mm
5) Fampiasana: Ny fantsika barbed dia ampiasaina betsaka amin'ny zaridaina, orinasa, seranam-piaramanidina ary fiarovana hafa amin'ny rindrina.Natao ho fiarovana.Mba hilalao ny anjara fiarovana, ny visy dia azo amboarina amin'ny rindrina miaraka amin'ny loha fanitarana na fefy metaly.
Ny lehibe kokoa handravaka ao amin'ny lalan-dra lehibe ny fifamoivoizana, mba hanindrona ny fahavalo kodiarana fiara;
Ny fielezan'ny kely kokoa eo anoloana sy ny halaliny, mba hanakanana ny miaramila an-tongotra sy ny hetsika an'habakabaka.
Ny haben'ny afovoany be ampiasaina amin'ny zaridaina, orinasa, seranam-piaramanidina sy rindrina hafa ary fiarovana hafa, manohitra ny halatra.
6) Endri-javatra: Aesthetic bika aman'endriny sy ny fiarovana fampisehoana tsara, fampisehoana, mora ny hametraka, avo lafin-javatra fiarovana, maro ny fika, ary tsara deterrent vokany, harafesiny fanoherana, fahanterana fanoherana, tara-masoandro fanoherana sy ny toetrandro fanoherana.
Habe hafa dia araka ny takian'ny mpanjifa.
Fitaovana: tariby vy karbaona ambany sy takelaka SS.
Habe: halavan'ny barbed 80cm-120cm
1,25m ny halavany manontolo
teo aloha: Fantsika tafo
Manaraka: Fefy rojo vy